နှစ်သစ်အလွမ်း… Happy New Year 2015 | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » နှစ်သစ်အလွမ်း… Happy New Year 2015	22
နှစ်သစ်အလွမ်း… Happy New Year 2015
Posted by အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် on Jan 1, 2015 in Creative Writing, My Dear Diary | 22 comments
ဒီနေ့ဟာ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်နေ့…၂၀၁၄ နှစ်ဟောင်းရဲ့ နောက်ဆုံးနေ့…
အိမ်က မိသားစုတွေကတော့ အမျိုးတစ်ယောက်အိမ်က နှစ်ကူးအကြို စားပွဲသောက်ပွဲဖိတ်လို့
သွားကြလေရဲ့…ကျုပ်ကတော့ စိတ်မပါလို့ မလိုက်သွားခဲ့ပါဘူး….
တကယ့်လက်တွေ့ဘ၀ နောက်ကြောင်းကို..ဖြေးဖြေး ရေးရေး ပြန်တွေးကြည့်နေမိပါတယ်..
အော်…ဘာလိုလိုနဲ့ ကျုပ်ရဲ့မွေးသဖခင် ကျေးဇူးရှင် ကျုပ်တို့ကို စိတ်ချလက်ချထားသွားခဲ့တာ
၂ နှစ်တင်းတင်း ပြည့်တော့မှာပါလား…..အဖေအပင်ပမ်းအဆင်းရဲခံပြီး ပြုစုပျိုးထောင်ပေးခဲ့တဲ့
အဓိကကတော့ ဘယ်သူမဆို ကိုယ့်မိဘကို ကိုယ်ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်
မရှိခဲ့ကြပါဘူးလေ…ဒါကို တချို့ ကလည်း အတိတ်ကံလို့ပြောကြသပေါ့
ဘယ်လိုပဲပြောပြောပါလေ…ပြောခဲ့သလိုပဲ..“ ကိုယ့်မိဘကို ကိုယ်ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်
ဆိုတော့…ဒီနေရာမှာ ဘယ်လိုမှ အားနာစရာ ငဲ့ညှာထောက်ထားစရာ
သုံည ကနေ တစ် ဖြစ်ဖို့တော်တော်ခက်လှပါတယ်….
လုပ်တဲ့လူနဲ့ သူ့ဇွဲနပဲ ပေါ်ပဲမူတည်တာပါလေ…
တဲ့…အမှန်ပေါ့…ကူမဲ့သူရှိရင် ပိုလွယ်တာ လူတိုင်းသိနေတာပဲ…
ကူမဲ့သူ မရှိရင်ကော….ဘ၀က သွားပြီလား…ဘာမှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလား…
နိုး နိုး နိုး နိုး
လူနီ ဆိုတဲ့ကောင်ကို စစ်သားတစ်ယောက်ရဲ့ မိသားစုထဲမှာမွေးပါတယ်
လူနီ့ ကလေးဘ၀ကတော့ သိပ်အခက်အခဲမရှိ သူများကလေးတွေလိုပဲ
လူနီ ငါးတန်းအရောက်မှာတော့ အမေက သူ့ဘ၀မှာ ဆယ်ကြိမ်မြောက်
မွေးဖွားခြင်းအနေနဲ့ ညီမလေး အမွှာနှစ်ယောက်ကိုမွေးပါတယ်…
ပြသနာက အမေက နှစ်ယောက်လုံးကို နို့ဝအောင်တိုက်နိုင်လောက်အောင်အားမရှိရှာပါဘူး
ဘယ်လိုအားအင်ရှိနိုင်ပါ့မလဲဗျာ…တစ်နေ့တစ်နေ့ စားနေရတာက အဟာရအသာထားလို့
အိမ်စားရိတ်ထဲမှာ နို့မှုန့်ဖိုးက ပိုလာတာပေါ့…
အိမ်ရဲ့တစ်ခုတည်းသော ၀င်ငွေကတော့ အဖေပဲပေါ့….အဖေ့ကိုကြည့်ပြန်တော့…
ကျုပ်ငါးတန်းရောက်လို့ ညီမလေးအမွှာမွေးတဲ့အထိ သုံးရစ်ခပ်နွမ်းနွမ်းပါပဲ
အိမ်မှာက အဲ့အချိန်က အဖွားအပါအ၀င် မိသားစုဝင် ၁၄ယောက် ရှိနေပြီလေ…
အဖေတစ်ယောက်ထဲဝင်ငွေနဲ့ ကျုပ်တို့မှာ ဆန်ပြုတ်တစ်နပ် ထမင်းတစ်နပ်ပေါ့…
ဒီတော့လည်း..အမေ့ခမျာမနေသာပေဘု..“မောင်တစ်ထမ်း မယ်တစ်ရွက်”ဆို မဟုတ်လား
ဒီတော့ ကြံစီရပြီပေါ့…လူနီ့အထက်က ခပ်လှမ်းလှမ်းအကို အမ တွေကျတော့လည်း
အတန်းကြီး အရွယ်လေးရတော့ ရှက်ရှာမယ်…လူနီနဲ့ လူနီ့အထက်ကပ်ရက်က ကိုလတ်
မက်စ် မှာ အကြော်နဲ့ ဟင်းချက်လေးတွေသွားရောင်းတဲ့….မနက်စောစောလည်း ကျောင်းမသွားခင်
မက်စ်မှာပဲ ကောက်ညှင်းပေါင်းနဲ့ အကြော်ရောင်းတဲ့….
ဒီလိုနဲ့ စိတ်ပျက်လက်ပျက် မလွှဲမရှောင်သာ မိခင်ကြီးပေးအပ်တဲ့တာဝန်ယူလိုက်ရသပေါ့
အစပိုင်းသာ စိတ်ပျက်( ရှက်လည်းရှက်ပေါ့လေ)တာဗျ…နောက်တော့ ပျော်သွားရော..
၁။ မနက် ည ဈေးရောင်းပေးနေတဲ့အတွက် စာမကျက်ရဘူး(အဖေက စာကျက်ဖို့ မနက်လေးနာရီဆိုအားလုံးနှိုးနေကျလေ..ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်မပါ)ကျုပ်တို့က ၆နာရီမှထရတယ်
၂။ မနက်ပိုင်း မကုန်တဲ့အကြော် ကျောင်းသွားခါနီး စါးရတယ် (အမေရှုံးတာမြတ်တာတော့မသိ)
၃။ ညနေပိုင်း တပ်က မက်စ်မှာ ဟင်းသွားရောင်းရင်း ထမင်းကျွေးတာဝန်ခံတွေနဲ့
ရင်းနှီးလာတော့…မက်စ်က ရဲဘော်တွေ မကုန်တဲ့( တစ်ချို့လာမစားတဲ့) ထမင်းဟင်းတွေ
အိမ်သယ်လာတော့ တစ်အိမ်လုံး ဆန်ပြုတ်စားနေရာကနေ ထမင်းစားကြရတယ်။
ဒါကြောင့် အဲဒီတုန်းကနေခဲ့တဲ့ တပ်ကလည်းကျေးဇူးရှင်စါရင်းထဲပါတာပဲပေါ့ဗျာ…
လပါတ်ကျရင်တောင်ဆော်သဗျ (အဆင့်ကောင်းလောက်အောင်တော့ မတွန်းပါဘူး)
နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက် တွေဆိုလည်း ကျုပ်တို့ညီအကိုတွေ ငွေရမဲ့အလုပ်
အဲ….အဲ့ဒီလိုနဲ့ဖြစ်သန်းလာခဲ့တာ…လူနီ လည်း ဆယ်တန်းရောက်ရောဆိုပါတော့…
အဲ့တော့ ကျုပ်က မန်းတလေးေ၇ာက်နေပါပြီ…
အလုပ်တစ်ဖက် စာမကျက်နိုင်တဲ့ကောင် ဘယ်အောင်လိမ့်မတုန်း…
ဆယ်တန်းမှာဘုန်းကနဲ ကျပါလေရော….ကျုပ်အဖေကလည်း သဘောပေါက်ပါတယ်
ရိုက်ဖို့နေနေသာသာ ဆူတောင်မဆူဘူးဗျ…(အဲ့တုန်းက ဆယ်တန်းအောင်ချက်နည်းလွန်းလို့
ကျုပ်ကတော့ ကျောင်းဆက်မတက်ပဲ တပ်ထဲဝင်ချင်နေပြီ
အရွယ်ရောက်တာနဲ့တပ် ထဲသွင်းမယ်ဆို မူလတန်းကတည်းက
ညညသူများတွေအိပ်ချိန် ကျုပ်မအိပ်ပဲ စာကိုကြိုးစားခဲ့ပါတယ်
ဒုတိယနှစ် ဆယ်တန်း ဘီ လစ် နဲ့ပဲအောင်သဗျ……
အဲ့ချိန်ထိကျုပ်စိတ်မှာ လက်လျှော့ပြီး စစ်ထဲဝင်လိုက်ချင်တုန်းပဲ
ကျုပ်နဲ့ ကျောင်းနေဖက် တပ်ထဲကသူငယ်ချင်းအားလုံးလိုလို တပ်ထဲဝင်ကုန်ကြပြီ…
ကျုပ်အဖေကို မပြောရဲတာနဲ့ပဲ နောက်တစ်နှစ် ကျရာအလုပ်လုပ်ရင်း…
မှာနေတဲ့ ဆယ်တန်းနှစ်ချင်းပေါက်အောင်သွားတဲ့ သူငယ်ချင်းရဲ့အဖေက..
အဲကတည်းက မခံချင်စိတ်ဖြစ်ပြီး ညည ကျုပ်မအိပ်သလောက်ပဲ..စာလုပ်တယ်
ကျုပ်အာအိုင်တီ တတိယနှစ်ပြီးကျောင်းပိတ်တော့ မန်းလေးကို
အပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့ ကျုပ်သူငယ်ချင်းအိမ် သွားလည်သေးတယ်….
အဲ့အချိန်မှာ နှစ်ချင်းပေါက်အောင်ခဲ့တဲ့ ကျုပ်သူငယ်ချင်းက ဘွဲ့ရပြီး
မိန်းမရ လုပ်စရာအလုပ်မယ်မယ်ရရ မရှိပဲ မိဘအိမ်ကပ်စားနေသဗျ
သူ့အဖေက ကျုပ်ကို ထူးထူးဆန်းဆန်းပြောသေးတယ်…
“လူနီရာ..မင်းလိုဖြစ်မယ်မှန်းသိရင် ငါ မင်းသူငယ်ချင်း xxx ကို
ဒီနေ့ဟာ နှစ်သစ်ရဲ့ အစနေ့ပါ
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၃ခုနှစ် ဇန္န၀ါရီလ ၆ရက်နေ့က ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရှာသော..သားသမီး ၁၂ယောက်ကို
မငြို မငြင် လုပ်ကိုကျွေးမွေး ပညာသင်ပေးခဲ့တဲ့ အံ့ဖွယ်
သံမဏိလူသားကြီး ကျုပ်ရဲ့မွေးသဖခင် စစ်သားကြီး အားအမှတ်ရ လွမ်းဆွတ်ရင်း…
ကျုပ်လက်ရှိကျင်လည်ကျက်စားနေသော မန်းဂဇက်( မြန်မာ့ဂဇက်) ရွာထဲမှလူငယ်လူရွယ်များကို
ဇီးရိုး ဘ၀မှသည် တစ်လုပ်နိုင်ကြောင်း နှစ်သစ်ကူးလက်ဆောင်ပါးလိုက်ပါသည်ခင်ဗျား။
၁၊ ၁၊ ၂၀၁၅
ခင်ဇော် says: အဲ့တုန်းးးက တော့ လူနီလေးးး
မင်္ဂလာ နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ မိုက်မိုက်
Kaung Kin Pyar says: မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါ အူးလူနီကြီးရေ…
မိဘထောက်ပံ့နိုင်လို့ CEO တွေ ဒါရိုက်တာတွေ တက်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေထက်…သုညကစလို့ ရုန်းကန်ခဲ့ပြီး အပေါ်ရောက်တဲ့ဘ၀တွေကို ပိုအထင်ကြီးပါတယ်….။
ဖိအားတွေကို ဘ၀အတွက်တွန်းအားအဖြစ်ပြောင်းယူလိုက်တာလဲ လေးစားပါတယ်…
ဒါနဲ့ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဇန်န၀ါရီ ၆မှာ…အဖေဆုံးခဲ့တာလား…
Iris says: ​ပျော်​ရွှင်​ဖွယ်​နှစ်​သစ်​ဖြစ်​ပါ​စေ ဦးမိုက်​။
စကားမစပ်​ ဦးမိုက်​ က ဦး​ကျော်​ဟိန်း နဲ့​တော်​​တော်​တူတယ်​။
အောင် မိုးသူ says: ဦးမိုက်ပြောမှ ဖေဖေ့ကိုသတိရ ဒါမယ့် ကောင်းကောင်းတောင်မမှတ်မိပါဘူး ဆုံးပါးသွားတာ (၂၄)နှစ်ကြာပြီကိုး။
kyeemite says: .Kaung Kin Pyar ရေ..ဟုတ်တယ်ဗျာ…ဂဇက်အဖွဲ့တွေပထမဆုံးအကြိမ်ဆုံတွေ့ကြဖို့ လုံးပမ်းနေချိန်ပေါ့
.ဇန္န၀ါရီ ၆ရက်နေ့အဖေဆုံးပါတယ်….တွေ့ဆုံပွဲက ဇန္န၀ါရီ ၂၀ရက်မှာပါ
.အစောဆုံးဝင်ရောက်အားပေးသွားတဲ့ လူမိုက်ခင်ဇော်ကို လူနီကြီး ကကျေးကျေးပါဗျ .Iris နဲ့ ကိုအောင်မိုးသူလည်း ဖတ်ရှုအားပေးလို့သင့်ခရုပါ…ကိုအောင်မိုးသူအဖေအစောကြီးခွဲသွားတဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ…
Swal Taw Ywet says: Burma army Electrical and Mechanical Engineering corp ( BEME ) ရဲ့ ဆောင်ပုဒ်လေးပေါ့။
သေနတ်များပစ်နိုင်နေစေရမည်။ ဘီးလုံးများလိမ့်နေနိုင်ရမည် တဲ့။
ဦးကြီးမိုက်ဖေဖေက လက်နက်ပြင်တပ်ကြပ်ကြီး၊ ခြေလျင်တပ်တွေနဲ့အတူ ရှေ့တန်းလိုက်ရတယ်။
ကျနော်ဖေဖေက ယာဉ်ပြင်တပ်ကြပ်ကြီး ကားတွေပြင်ရတယ်။
ပွင့်လင်းရာသီ ရှေ့တန်းရိက္ခာစုပုံ Damping ကာလဆိုရင်တော့ ယာဉ်တန်းနဲ့အတူ ရှေ့တန်းလိုက်ရသပေါ့။
ကျနော် ဆယ်တန်းနှစ်ချင်းပေါက်အောင်တော့ DSA တက်ချင်တာ မိဘ ၂ပါးစလုံး စစ်သားစစ်သမီးတွေဖြစ်ပြီး သဘောမတူလို့မတက်လိုက်ရဘူး။
အဲဒီတုံးက တပ်မိသားစုတွေကို လွမ်းသေးသဗျာ။ တကယ့်ကို နိုင်ငံအတွက်ဘဲ မြှတ်နှံထားခဲ့ကြတာ။
ခုတော့ဖြင့်- – – – – – –
မြစပဲရိုး says: ပါပါကြီး က ဂလောက် ချောတာ သားခမျာ ခြေဖျားတောင် မမှီပါလား ကွယ်။
ကူ သူ ရှိလဲ ဘဝ မှာ ရေရရာရာ နေရာ မရှိတဲ့ ပုံပြင်များလဲ ရှိပါ့ ကကြီးမိုက်ရယ်။
ကံ၊ ဉာဏ်၊ ဝီရိယ ဆိုတဲ့ အတွဲ ညီမှ ဆိုတာ ဒဏ္ဍာရီ မဟုတ်ပါ။
မိဘ ချမ်းသာ ဆင်းရဲ အပါ့ထား။ အနဲ ဆုံးတော့ လူသားဆန်တဲ့ တာဝန်ယူ၊ တာဝန် ကျေ တတ် တဲ့ စိတ် ရှိတဲ့ မိဘ ဝမ်းထဲ ဝင်ခဲ့ရတာ လဲ ကံ ကောင်း တာပါဘဲ။
ယုံကြည်ချက် ပြင်းရင် (ပျင်း မဟုတ်) သုည က နေ လဲ ထိပ်ဆုံး ရောက်နိုင်တာ လေး ကို ထပ်ဆင့် ထောက်ခံပါတယ်။
ဉာဏ်နဲ့ ယှဉ်ကြဖို့တော့ လိုမလားဘဲ။
kyeemite says: .မြစပဲရိုး says: မိဘ ချမ်းသာ ဆင်းရဲ အပါ့ထား။ အနဲ ဆုံးတော့ လူသားဆန်တဲ့ တာဝန်ယူ၊ တာဝန် ကျေ တတ် တဲ့ စိတ် ရှိတဲ့ မိဘ ဝမ်းထဲ ဝင်ခဲ့ရတာ လဲ ကံ ကောင်း တာပါဘဲ။
min kyansix says: လူနီကြီးဆိုတော့ ရဲရဲတောက်ပေါ့
uncle gyi says: လူတိုင်းမခံချင်စိတ်ရှိကြတယ်
padonmar says: အောင်မြင်ချင်းတူတူ ဘယ်သူမြတ်သည်လဲကွယ်….
(အဲဒီ သူငယ်ချင်းရဲ့ အဖေကို ကျေးဇူးတင်ထိုက်ပါတယ်။)
pooch says: ဦးမိုက်​​ပြောသလိုသာဆို ရန်​သူ​တွေ ပြိုင်​ဖက်​​တွေကို​​ များများရှိ​လေ ပိုတိုးတက်​​လေ​ပေါ့ သက်​ကြီးစကားသက်​ငယ်​ကြား ​ကျေးဇူးတင်​တတ်​တဲ့စိတ်​​လေး ​မွေးယူပါ့မယ်​
​မွေးအ​ဖေကို စွန့်​လွှတ်​ရတာ အနှစ်​ ၂၀​ကျော်​ ရှိပြီ အိမ်​​ထောင်​ကျိုးဖြစ်​ပြီးအတူလည်းသိပ်​မ​နေပဲ ​ကျွေးအ​ဖေ ဦးကြီးလက်​​ပေါ်ကြီးခဲ့တာ
သူက ​တော့ လူ​ကောင်းဆိုတာထက်​ပို​ကောင်းတဲ့ လူ​ကောင်းကြီး
သူ့​ကျေးဇူးနဲ့ ထမင်း ထမင်းအိုးထဲက ရတာ​လောက်​ပဲသိတဲ့ဘ၀နဲ့​နေခဲ့ဖူးတယ်​
အခုမှ ကိုယ်​တိုင်​ပျိုးကျဲရတဲ့ဘ၀​ရောက်​မှပဲ သူ့တန်​ဖိုး​တွေ နားလည်​လာတယ်​
​ကောင်းရာမွန်​ရာမှာ ရှိ​နေ​ရောက်​​နေမယ်​လို့ ယုံတယ်​
Ma Ma says: အဖေက သုမောင်နဲ့တူတယ်။
ဆိတ်ကျောင်းနေတာပဲကောင်းပါတယ်လို့ ပြောခဲ့တဲ့လူကြီး ဦးမိုက်ဘ၀အတွက် ကျေးဇူးအများဆုံးလူလို့တောင် ပြောရမယ်။
ူသူ့စေတနာ သူ့အကျိုးပေးတာကတော့ ဧကန်ပဲ။
အဲဒါကြောင့် စိတ်ထားသလိုဖြစ်ကြရတဲ့၊ မသိပဲနဲ့ လုပ်ခဲ့ကြတဲ့ ကုသိုလ်/အကုသိုလ်ကံတွေဟာ အင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်။
kyeemite says: .Swal Taw Ywet
.Ma Ma…..တို့အားလုံးကွန်မန့်လေးတွေချီးမြှင့်ကြလို့ကျေးဇူးပါဗျာ… – etone ရဲ့“အပူပင်မဲ့စွာ စာသင်ခွင့်ရကြပါစေ” စာလေးကိုတွေ့ပြီးရေးချင်စိတ်ဖြစ်နေခဲ့တာဗျ…
.မိဘတွေသာ ကလေးတွေကို .ကိုယ့်ထက်သာအောင်မရမကမြှင့်တင်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်လေးရှိဖို့ပဲလိုတာပါ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5021
Mr. MarGa says: “ ကိုယ့်မိဘကို ကိုယ်ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်
ဖြစ်လာတဲ့ အခြေအနေပေါ်မှာ အကောင်းဆုံး လုပ်ကြရမှာပေါ့လေ………
Maung Thura says: တစ် ဖြစ်ချင်တယ်..
ဒါမယ့် ခုထိ…တစ်နေသေးတယ်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1327
Yae Myae Tha Ninn says: အနော်လဲ မောင်မာဃ နဲ့ အတွေးတူတယ်ဗျာ… မိဘဆိုတာ ကိုယ် ရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘူးလေ…
La Yeik says: ဟုတ်ပ အူးမိုက်အဖေက အူးသုမောင်နဲ့ဆင်တယ်နော်…အူးမိုက်ကိုလဲလေးစားပါတယ်…နာစရာကို ခွန်အားအဖြစ် အသုံးချတက်ခဲ့လို့ပါ…အာရ်အိုင်တီ ကျောင်းတက်ရင်းနဲ့ အဲလိုပြောခဲ့တဲ့ အူးလေးဂျီးကို သွားတွေ့ရတာ အရသာတော်တော်ရှိမှာနော်…သာမီးကတော့ သာမီးကို အဲလိုပြောခဲ့တဲ့လူတွေဂို တေးတော့တေးထားတယ်…အူးမိုက်လို အခြေအနေမျိုးရောက်အောင်ကြိုးစားရအူးမှာ
Shwe Ei says: -ရွေးချယ်ခွင့်မရှိသော်လည်း စံပြုထိုက်တဲ့ မိဘမျိုး ရခဲ့တဲ့အတွက် အားကျပါအိ။
-ဘ၀မှာ ကိုယ့်အဖေကို ယုံကြည်အားကိုးစိတ်အပြည့်နဲ့ အဖေလို့ တစ်ခါလောက်ခေါ်ကြည့်ချင်သေးတယ်။
-လက်ရှိအခြေအနေအရတော့..အဖေသည် အနန္တောအနန္တ ငါးပါး ဂိုဏ်းဝင် ဖြစ်သည်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ -တတ်နိုင်တဲ့အချိန်တတ်နိုင်သလောက် ကန်တော့ရုံထက် ပိုပြီး မစဉ်းစားဖစ်တော့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14409
kai says: သားသမီး၁၂ယောက်ဆိုတော့… (သူတို့ဘာဖြစ်နေနေ).. လူ၁၂ယောက်အား.. နည်းလား…
kyeemite says: .ဟုတ်ပ သဂျီးရယ်…ကျုပ်ကိုယ်တိုင်ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ နောက်ကြောင်းကို ကျုပ်တောင်မယုံနိုင်ဘူး
.အဖေနဲ့အမေ ကိုအံ့သြတာတော့ခုတိုင်ပါပဲ…ဘယ်လောက်များခေါင်းမီးတောက်ခဲ့ကြလေမလည်း Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4670
ခင် ခ says: ဘ၀ကို လွယ်လင့်တကူမဟုတ်ဘဲ ခက်ခဲစွာဖြတ်သန်းပြီး ရပ်တည်နိုင်တဲ့အခြေတစ်ခုကို ရောက်မိတဲ့သူတိုင်း မိမိကြိုးစားဖြတ်တမ်းခဲ့ရတာတွေကို အားရကျေနပ်တတ်ကြသလို မေ့ကောင်းစရာအတိတ်လို့လဲ မှတ်ယူမှာမဟုတ်ပါဘူးလေ။
ဘ၀ကြမ်းကြမ်း အလှပန်းတွေ တက်သစ်စလူငယ်တိုင်း ကြုံကြဆုံကြပါစေ။